Artha Sansar News - ब्लुबुक नविकरण अब घरैमा, १०१ सेवाले दिँदैछ यस्तो सुविधा
आइतबार, ०६ जेठ २०७५, १६ : १२
बुधबार, २० पुष २०७३
काठमाडौँ – के तपाई ब्यवसायिक कामले व्यस्त हुनुहुन्छ ? कार्यव्यस्तताको कारण समयमा आफ्नो ब्लू बुक नविकरण गर्न भ्याउनुभएको छैन ? लाईसन्सको फर्म घण्टौ लाईनमा बसेर बुझाउन दिक्क लागिरहेको छ ?अब तपाईंको तनाव कम हुनेछ । काठमाडौँको डिल्लिबजारमा सुरु भएको छ १०१ सेवा । यसका कर्मचारीले तपाईंको ब्लु बुक घर वा कार्यालयमै आएर लैजान्छन् । नविकरण गरेर तपाईंलाई ल्याइदिने छन् ।
कम्पनीले अनलाईनबाटै सेवा दिने बताएको छ । कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जहाँसुकै सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमितमान बस्नेतले गराए । कम्पनीले लाईसन्सको आवेदनसमेत भरिदिने काम गर्छ । आवेदन दर्ता गराउन घन्टौ लाइनमा बस्नु पर्नेहरुका लागि यसको सेवा निकै उपयोगी भएको बस्नेतले बताए । १०१ सेवाले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको एक महिना भएको छ ।
यस कम्पनीले सेवा दिएवापत २ पाङग्रे गाडीको लागि ३८५ रुपैयाँ र ४ पाङग्रे गाडीको लागि ६८५ रुपैयाँ लिने जानकारी बस्नेतले दिए । काठमाडौँमा मात्र यो सेवा सुरु गरिएको कर्मचारी लिप्पा कर्मचार्यले जानकारी दिईन् । यस कम्पनीको सेवा लिन ९८६१४९२४६९ नम्बरमा फोन गर्न सकिने छ ।
एक्विजिसनमा गएको कसमसको कारोबार रोक्का
कुमारी बैंकले प्रस्ताव गर्यो २१ प्रतिशत बोनस
न्यूरोड मोबाइल महोत्सवमा १७ हजार स्मार्टफोन बिके
अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्न विभाग सक्रिय